‘छ एकान छ हेर्नुस् मन नपर्ने कुरै छैन’ – : निता ढुगांना-Nagarikaawaj.com
‘छ एकान छ हेर्नुस् मन नपर्ने कुरै छैन’ – : निता ढुगांना
हाँस्न मन नहुने यो ससांरमा कोही होला त । हाँस्न सबैलाई मन लाग्छ । त्यसैले टेलिभीजनहरुमा हसाउने खालका सिरीयलहरु छ्याप्छ्याप्ती हेर्न पाईन्छ । दर्शकहरु पनि त्यस्तैमा रमाउन चाहान्छन् । त्यही भएकैले होला, यस्तै खालको एउटा चलचित्र ‘छ एकान छ’ निर्माण भएर शुक्रवारदेखी देशव्यापी रुपमा रिलीजमा समेत आएको छ । छ एकान छ को जत्ति चर्चा छ, त्यो भन्दा वढि चर्चा उक्त चलचित्रमा मुख्य भुमीकामा अभिनय गरेकी नायीका निता ढुगांनाको छ । चर्चित हास्यकलाकार दीपकराज गिरी, शिवहरि पौडेल, जितु नेपाल, सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, केदार घिमिरे ‘माग्नेबूढा’ जस्ता चर्चित कमेडियनहरु चलचित्रको कथाभरीजसोनै नायीका ढुगांनाको अघिपछि भएकाले पनि यि नायीकाको चर्चा वढि भएको हो । नायीका ढुगांनासँग रामजी ज्ञवालीले ‘छ एकान छ’ को वरिपरी रहेर गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अशं ।
पहिलो दिन चलचित्रवारे कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
– भ्याली वाहीर त मैले थाहा पाएको छैन, तर भ्यालीमा चाहि वम्परनै हान्यो । आज रेकर्डनै हान्यो । आशा गरौं आउने दिनमा पनि यहि रेकर्ड कायम राख्नेछ ।
त्यसो भए अव चलचित्रहरुको लाईन आउने भयो हैन त ?
– कहिले खाली छु र भन्या । कुरा के हो भनेनी, आफु अभिनीत चलचित्र राम्रा चल्यो भने त त्यो प्लस प्वाईन्ट हुन्छनै जस्को लागी पनि । तर ‘छ एकान छ’ ले चाहि अझ मेरा लागी राम्रो गर्नेछ ।
अन्य चलचित्रको तुलनामा ‘छ एकान छ र वितेका पल’ साथै त्यसमा अभिनीत तपाई र केकीको वढि चर्चा छ नी ?
– यो सामान्य हो । एकैदिन रिलीजमा आउने चलचत्रिहरुको चर्चा हुन्छनै । अनि दाज्नेपनि गरिन्छनै । वितेका पल कुनै फरक विषयमा वनेको होला । तर पहिलो पटक नेपालमा फुल हाँस्य विधामानै रहेर वनाईएको छ एकान छ चाहि साच्चीकै राम्रो चलचित्र वनेको महसुस गरिएको छ । अर्को कुरा मैले सवै चर्चित हास्यकलाकारहरुको विचमा काम गरेकाले पनि मेरो अभिनय हेर्न दर्शक निकै आत्तीनुभएको थियो । शुक्रवारवाट चाहि अल नेपाल रिलीजमा आयो । सम्भवतः वाहीर पनि राम्रो व्यापार र दर्शकको भिड होला ।
अव चाहि तपाईको ‘वे’ कस्तो हुन्छ ?
– वे त एउटै हो । यहि हो । चलचित्रनै हो । केही समयमै चलचित्र ‘ धुन’ गर्दैछु । मैले अहिलेसम्म चलचित्रहरु जति गरेकी छु । सफल पनि भएका छन चलचित्रहरु । केही समय अघि मात्रै ‘नोट वुक’ सर्वाधिक चर्चित भयो । आगामी भविष्य भनेको त्यो विन्दुमा पुग्न मात्रै वाकी छ ।
त्यो विन्दु भनेको ?
– सफलताको केन्द्रविन्दु ।
थोरै चलचित्र क्षेत्रकै कुरा गरौन, सधै सिरयिस मुभी खेलेर दर्शक र फ्यानहर रुवाउने तपाई यसरी एकाएक हास्यव्यङ्ग्य चलचित्रमार्फत हसाउन खोज्दा अफ्ट्यारो भएन ?
– मैले हिट क्यारेक्टर गरेको छु यो चलचित्रमा । सवै हास्यकलाकारहरुको विचमा वसेर अभिनय गर्दा मज्जामनै आयो रमाईलो भयो । त्यत्ती गाह्रो महसुुस भएन । फिल्ममा साच्चैकै भन्नेहो भने म फुल भएकी छु भने ६ जना भमराहरु झुम्मीएका छन । यसले चलचित्र निकै रोचक र हँसाउन वाध्य वनाएको छ ।
‘छ एकान छ’ नहेर्नुभएका दर्शकहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– चलचित्र एकदमै फुल ईन्टरटेनमेन्ट वनेको छ । पैसा तिरेर जानुहुने तपाईलाइ कसैलाईपनि न वान्ता आउनेछ, न रिगंटा लाग्नेछ, न वाक्क लाग्ने छ, न दिक्क, न प्याक्क । पुरा समय पेट मिची मिची हसाउनेछ । काठमाण्डौमा हाउसफुल भएकाले पनि धेरै दर्शकहरले या चलचित्रलाई मन पराउनुभएको हामीले पाएका छौं । एकपटक तपाईपनि चलचित्र हेर्न जानुस् । तपाईले खर्चिएको पैसा खेर जानेछैन ।
ठोक बाजा ठोक बजारमा, भिडियाे
अनिलकाे रहरमा बिनुको जवानी छताछुल्ल [भिडियो ]